अब कता जाला दक्षिण एशियाली राजनीति ? - Kendrabindu Nepal Online News
अब कता जाला दक्षिण एशियाली राजनीति ?
२०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी, भाजपाको प्रचण्ड बुहमतसंगै फेरि एकपटक दक्षिण एशियाली राजनीति मोदीमय भएको छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी लगातार दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि दक्षिण एशियाको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने अड्कलबाजीहरु शुरु भएका छन् ।
भारतमा नेहरु युगपछि सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीले लगातार दुई कार्यकाल बुहमत प्राप्त गरेकी थिइन् । त्यसयता, भारतीय राजनीतिमा त्यस्तो चमत्कारिक प्रदर्शन कसैले गर्न सकेको थिए । सन् २०१९ मा आएर भाजपाले मोदीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा त्यो इतिहास दोहोर्याएको छ ।
मोदीले यसपटकको जित धेरै अर्थमा ऐतिहासिक बनेको छ । भाजपाको गढ मानिने पश्चिम र उत्तरी भारतबाहेक यसपटक मोदीको चमत्कार पूर्वी र दक्षिण भारतमा समेत देखिएको छ । यसअघिका आम निर्वाचनमा पूर्वी र दक्षिण भारतमा मुख्यगरि कंग्रेससंगै क्षेत्रीय पार्टीहरुको बर्चश्व रहने गरेको थियो । यसपटकक्षेत्रीय पार्टी पनि भाजपाका अघि खुम्चिन पुगेका छन् । भापजाको प्रभाव यसपटक यति सम्म देखियो कि कंग्रेसको गढ मानिएको उत्तर प्रदेशको अमेठीमा अध्यक्ष राहुल गान्धि आफैं पराजित हुन पुगे । भापजाकी केन्द्रिय मन्त्री स्मृति इरानीले राहुललाइ अमेठीमा पराजित गरेकी हुन् ।
अमेठीमा सन् १९९९ पछि कंग्रेसले पराजय भोगेको हो । सन् १९४७ यता अमेठीमा कंग्रेस हारेको यो तेस्रो पटक मात्र हो ।
निर्वाचनमा मोदीको जादू
यसपटकको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जादू यसरी चल्यो कि उनलाई जनताले आधुनिक भारतीय राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकी बनाइदिए । यसअघि सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धी अहिलेका मोदीजस्तै शत्तिशाली प्रधानमन्त्री थिइन् । त्यसयता भारतमा यस्तो भारी बहुमतका साथ कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेका थिएनन् ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गर्न नसकेका काम र देखाएका सपना पुरा गर्न नसकेपनि भारतीय मतदातामाझ सिधै अपील गर्दै मोदी यसपटक पनि जित निकाल्न सफल भए । मोदीले सावित गरिदिएका छन् कि भारतमा बेराजगारी, आर्थिक बिकास र कृषि संकटजस्ता सामाजिक–आर्थिक मुद्धाको हल भाजपासंग मात्र छ ।
त्यो भन्दा पनि माथि हिन्दुत्वको नारालाई सबैभन्दा अगाडि राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्धामा आउने जटिलताको सामना गर्न भारतमा मोदी नै चाहिने नयाँ जनमतले सिद्ध गरिदिएको छ ।
‘चौकीदार चोर हो’ भन्ने नाराका साथ निर्वाचनमा महागठबन्धन बनाएर होमिएको भारतीय कंग्रेस आफैं फेरी उठ्न नसक्ने गरि थला परेको छ । चौकीदार चोर हो को नाराले नरेन्द्र मोदीमाथि ब्यक्तिगत रुपमा आक्रमण गरेपनि कंग्रेसको यो रणनीति पूर्ण रुपमा विफल मात्र भएन, स्यंम विपक्षीको महागठबन्धलाई नै हानी गर्यो ।
निर्वाचनमा उमेद्वार चयन गर्नमा ढिलाइ, प्रियंका गान्धिको अन्तिम समयमा इन्ट्रि र महागठबन्धनमाथीको अविश्वास कंग्रेसका हारका मुख्य कारण हुन् ।
त्यस्तै, सत्तारुढविरुद्धको अर्को गठबन्धन र उत्तर प्रदेशमा अखिलेस यादव र मायावतीले पनि खासै प्रभाव देखाउन सकेनन् । यूपीमा सत्तारुढ भाजपाकै बहुमत आयो । उता, पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेसले पनि भाजपाविरुद्ध सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न सकेन । बंगालमा भाजपाले यसपटक दह्रोरुपमा खुट्टा टेक्न सफल भयो ।
भाजपाका अध्यक्ष अमित शाह र मोदीको जोडी पक्कै पनि यस अर्थमा खुसी छ कि, पार्टीले भारतका नयाँ क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाएको छ । बंगाल, ओडीसा र तेलंगनामा भाजपाले आफ्नो बलियो उपस्थिती देखाएको छ । कुनैवेला वामपंथीको गढ मानिएको बंगालमा यसपटक एकजना पनि वामपंथी सांसदले जित हासिल गरेका छैनन् ।
वंशवादको अन्त्य ?
उत्तर प्रदेशको अमेठीमा कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीको हारले भारतमा परिवार र वंशवादको राजनीति अब कता जाला भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ । राहुलबाहेक ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवडा, जितेन पसाद, अशोक चौहानजस्ता कंग्रेसका वंशवादी नेता यसपटक निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।
यी बाहेक मुलायम सिंह यादवकी बुहारी डिंपल यादव, उनका भतिजा धर्मेन्द्र यादव, लालू यादवकी छोरी मीसा भारतीय पनि यसपटकको निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । यसले के देखाएको छ भने, भारतको अबको राजनीतिमा वशंवादलाइ कुनैपनि स्थान छैन ।
अबको दक्षिण एशियाली राजनीति
लोकसभा निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आउनु अघि नै मोदीलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बधाइ तथा शुभकामना दिनु सांकेतिक रुपमा निकै अर्थपूर्ण छ । त्यसो त निर्वाचन अघि नै इमरान खानले भारतमा मोदीजस्ता नेता फेरी निर्वाचित भएर आए काम गर्न सजिलो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । खानले दक्षिण एशियामा शान्ति, प्रगति र समृद्धिका लागि मोदीसंग मिलेर काम गर्न आफु उत्सुक रहेको बताएका छन् । उनले आफु यसका लागि आशावादी रहेको पनि बताए ।
दक्षिण एशियाली राजनीतिमा मुख्यगरि भारत–पाकिस्तानविचको कश्मिर मुद्धा कहिले निको नहुने घाउ जस्तै बनेको छ । यो बाहेक आतंकवादविरुद्ध लडिरहेको अफगानिस्तान दक्षिण एशियाको अर्को पेचिलो मुद्धा हो ।
दक्षिण एशियामा लोकप्रिय बन्दै गइरहेका इमरान खान र अत्याधिक ठूलो जनमत पाएका मोदी अब यी समस्या समाधान गर्न कसरी संगै अघि बढ्छन् भन्नेमा विश्वको चासो रहेको छ । यो क्षेत्रका दुई ठूला मुलुकका यी नेता शान्ति स्थापनका लागि मिलेर अघि बढ्न सके पक्कै पनि दक्षिण एशियाले समृद्धीको बाटो समाउने छ ।